बैंकहरुबीच ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा, हेर्नुहास् कुन बैंकको कति ? - Dainikee News::
बैंकहरुबीच ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा, हेर्नुहास् कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं, मंसिर २० । वाणिज्य बैंकहरुबीच अहिले ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । बैंकर्स संघले गतमंगलबार ब्याजदरबारे नयाँ निर्णय गरेसँगै बैंकहरुबीच ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा शुरु भएको हो।
आफ्नो बैंकमा भएको रकम अरु बैंकले तान्ने डरले यतिबेला बैंकहरु चिन्तित छन् । गत मंगलबारदेखि बाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती खातामा धमाधम ब्याजदर बढाउन थालेका हुन्। मंगलबारदेखि शुरु भएको ब्याजदर बढाउने सिलसिलामा तीन दिनभित्र पाँच वटा बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् ।
मंगलबार नै जनता बैंकले मासिक ब्याज पाँउने गरी जनता मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दर सार्बजनिक गरेको थियो । त्यसपछि बुधबार माछापुच्छ्रे बैंकले पनि ब्याज बढाएको थियो । माछापुच्छ्रे बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर साढे १२ प्रतिशत पुर्याएको छ। प्रकाशित ब्याजमा थप आधाप्रतिशतसम्म ब्याजदर बढी दिन सकिने भएकोले बैंकको ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ ।
बिहिबार थप ३ वाणिज्य बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्बजनिक गरेका छन् । जस अनुसार मेगा बैंकले न्युनतम १ लाखको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १२ दशमलव ५० ब्याज दिने भएको छ। प्रकाशित ब्याजमा थप आधाप्रतिशतसम्म ब्याजदर बढी दिन सकिने भएकोले बैंकको ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पुग्ने पक्का भएको छ । त्यो भन्दा कमको बचतमा भने बैंकले १० प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । त्यस्तै संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई ९ प्रतिशत ब्याजदर सार्बजनिक गरेको छ ।
त्यस्तै कुमारी बैंकले पनि न्यूनतम मौज्दात रु १० हजारमा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको लागि १३ प्रतिशत ब्याज घोषणा गरेको छ । प्रकाशित ब्याजमा थप आधाप्रतिशतसम्म ब्याजदर बढी दिन सकिने भएकोले बैंकको ब्याज १३ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने पक्का छ ।
यसै बीच बाणिज्य बैंकहरु धमाधम ब्याजदर बढाएपछि विकास बैंकहरुलाई पनि आफ्नो निक्षेप खोस्ने चिन्ता छाएको छ । त्यसकारण विकास बैंकहरु पनि ब्याजदर बढाउनतिर लागेका छन् ।
ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धाले निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने भए पनि ऋणीहरु भने ठूलो मारमा पर्ने भएका छन । निक्षेपमा ब्याज बढेसँगै ऋणको पनि व्याज बढ्ने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २०, २०७५ /Thursday, December 6th, 2018, 1:10 pm